xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: 2011
Living Color မဂ္ဂဇင်း၊ The Voice Weekly ဂျာနယ် တည်ထောင်သူနှင့် Myanmar Egress အား တည်ထောင်သူ တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ နေ၀င်းမောင် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီခွဲ ၀န်းကျင်တွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန် သွားသည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သည် မီဒီယာနယ်ပယ်သာမက Capacity Building Center ဖြစ်သည့် Myanmar Egress တည်ထောင်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည့်ပြင် မကြာသေးမီက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် အစိုးရဆွေးနွေးမှုများတွင်လည်း ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အောင်ထွဋ် အမည်ဖြင့် စာပေ များ ၊ ဆောင်းပါးများ ကိုရေးသားခဲ့သည် ။
သူတည်ထောင်ခဲ့သော The Voice Weekly ၏ facebook စာမျက်နှာတွင်မူ ၂၀၁၂ ကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့သူ "အောင်ထွဋ်" ဟုဖေါ်ပြကာ သူကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ဖေါ်ပြထားသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:04 PM
အထူးပါမစ်ယာဉ်မျိုးစုံ ၇၄၇၆ စီး အခွန်စည်းကြပ်ပေးပြီး ပါမစ်နှင့်မကိုက်ညီသော ယာဉ် ၇၁ စီးအား တားဆီးထားကြောင်း အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှသတင်းထုတ်ပြန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက စည်းကြပ်ပေးခဲ့သော အထူးပါမစ်ကား အရေအတွက်.မှာ လူစီးယာဉ် (၃၈၃)စီးရှိကြောင်း၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၁ ထိစည်းကြပ်ပေးခဲ့ သည့် အရေအတွက်မှာလူစီးကား(၇၃၇၆)စီး၊ဘတ်စ်(၂၇)စီး၊ကုန်တင်ယာဉ်(၇၃)စီးစုစုပေါင်း (၇၄၇၆)စီး ရှိခဲ့ပြီး ပါမစ်နှင့်မကိုက်ညီသောကား (၇၁)စီးအားတားဆီးထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပမည့်နေ့ရက် သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေညာချက်အမှတ် (၆၁/၂၀၁၁)ကို ဒီဇင်ဘာ (၂၉)ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာ လိုက်သည်။အဆိုပါကြေညာချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -
၁၃၇၃ ခုနစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၅ ရက်
(၂၀၁၁ ခုနှစ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်)
လွှတ်တော်အသီးသီးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လစ်လပ်နေသော မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ ပါ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ (ဂ)နှင့် နည်းဥပဒေ ၁၆ (က)တို့ အရ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်) တနင်္ဂနွေနေ့တွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် နေရာလစ်လပ်နေသည့် အောက်ပါ မဲဆန္ဒနယ်များ အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ် ကြေညာလိုက်သည် -
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:54 AM
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:01 AM
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:35 AM
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:15 AM
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:48 AM
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် စက်ဆန်း ကူးတို့ဆိပ် ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ မေတ္တာမွန် ဂိုဒေါင်အတွင်း ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခု ယနေ့ နံနက် ၂ နာရီ ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုမှာ အနီးတစ်ဝိုက်ရှိအဆောက်အဦများ ငလျင်လှုပ်သကဲ့သို့ တုန်ခါသွားပြီး မှန်များကွဲကျခဲ့သည်အထိ ပြင်းထန်ကြောင်းနှင့် မြောက်ဒဂုံမှပင် အဆိုပါ ပေါက်ကွဲသံကို အကျယ်ကြီးကြား၇ကြောင်း ဒေသခံများကပြောကြားပါသည် ။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့် ကူးတို့ဆိပ်လမ်းရှိ ဂိုထောင်ဝန်းအတွင်း စုစုပေါင်း ဂိုထောင် ၃၂ လုံးအနက်မှ ဂိုထောင် တစ်လုံးမှ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည် ။ အဆိုပါ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အသေအပျောက် ၁၀ ဦးခန့် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူထဲတွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးပါဝင်ကြောင်း လည်းသိရပါသည် ။ အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် ရောက်ရှိနေသူ တစ်ဦးက သေဆုံးမှုမှာ ဒီထက်ပိုနိုင်ကြောင်း ပြောကြားပါသည် ။
မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနသို့ ယနေ့ နံနက် ၄ နာရီအထိ ရောက်ရှိလာသော လူနာစုစုပေါင်း ၅၈ ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ ၁၁ ဦးလည်း ရောက်ရှိလာကြောင်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍7Days ၏ facebook စာမျက်နှာတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည် ။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ထိုသို့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း အတည်ပြုချက်မရရှိသေးပေ ။ ဒုက္ခသည်များအား မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အ.မ.က (၂၀) ၊ (၂၄)နှင့်ပုသိမ်ညွန့်ခြောက်လမ်းထိပ်ရှိ မဟာဝိဇယာရာမကျောင်းတိုက်တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာက အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:09 PM
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ၀ အထူးဒေသ(၂) ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့တို့၏ သဘောတူညီချက်(၆)ချက်
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ၀ အထူးဒေသ(၂) ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့တို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးချက်အရ အောက်ပါအချက်များကို ၂၀၁၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂၆)ရက်နေ့တွင် ပန်ဆန်းမြို့၌ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။
၁။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့်(၀) အထူးဒေသ(၂) ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့တို့ ၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၁)ရက်နေ့တွင် လားရှိုးမြို့၌ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသော သဘောတူညီချက်များကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ကြရန် သဘောတူသည်။
၂။ (၀) အထူးဒေသ(၂) နယ်မြေအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်ရင်းသားများ၏လူမှု ဘ၀မြင့်မားရေးနှင့်ဒေသတွင်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ပါဝင်ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် အတွက် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး နှစ်တို နှစ်ရှည် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိ်ုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်များချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူသည်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:03 AM
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 10:05 AM
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:05 PM
နာမည်ကျော် Iron Cross တေးဂီတ မိသားစု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံ
နာမည်ကျော် IC တေးဂီတအဖွဲ့က ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမ၏နေအိမ်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထိုတွေ့ဆုံမှုတွင် IC အဖွဲ့မှ ၉ ဦးနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည် ။
(ဓါတ်ပုံ - IC Facebook )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားသောတေးဂီတ အနုပညာရှင်များ နှင့် ၂ကြိမ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီးသည်အထိ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းမရှိသည့် IC အဖွဲ့ကို ဝေဖန်မှုများ ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:48 AM
" NLD မှာပညာတတ်မရှိပါဘူး "လို့ ဇာဂနာပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ်ဖေါ်ပြ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD မှာ ပညာတတ်မရှိကြောင်း ဇာဂနာ၏ ပြောဆိုချက်ကို ဒီနေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို Bangkok Post က ဖေါ်ပြရာမှာ "Our country has no intellectual people in the political area. For example ... [where] are the intellectual people in the NLD?" လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ် ။
" ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ပညာတတ်မရှိပါဘူး ဥပမာအနေနဲ့NLD ပါတီပေါ့ဗျာ ဘယ်မလဲပညာတတ် ? " ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာဟာ NLD ပါတီကိုသာမက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကသားတွေအကုန်လုံး ကို စော်ကား ပြောဆို လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သံတွေ စတင်ထွက်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ဇာဂနာ၏ ပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်မှာပဲ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားဘွယ်ရာ ပြောဆို မှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုမှုတွေ ထပ်မံထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဘန်ကောက်ပို့စ်ရဲ့ မူရင်းသတင်းကို အောက်မှာဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် -
သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ထံ ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ တောင်းပန်လျှောက်ထားလွှာမှ ထူးခြားချက်
နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ထံ ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ တောင်းပန်လျှောက်ထားလွှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ထူးခြားချက်တစ်ခုက ဆရာတော်ရဲ့ တောင်းပန်လျှောက်ထားလွှာ ဒုတိယစာမျက်နှာမှာ " ဘုရားတပည့်တော်သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများ၏ သားကောင် မဖြစ်စေရန်လည်း လွန်စွာသတိထား၍ ဖြေကြားနေရပါသည်ဘုရား " လို့ ဖေါ်ပြပါရှိပါတယ် ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဆရာတော်ကို သားကောင်အဖြစ် မီဒီယာတွေက အသုံးချနေတယ်ဆိုတာကို ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် သိရှိတော်မူသွားတဲ့သဘောပါဘဲ ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:51 PM
ရုရှားအစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု ထပ်မံဖြစ်ပွားပြန်
ရုရှားနိုင်ငံကလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမသမာမှုတွေရှိတယ် ဆိုပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်နေ တဲ့ သောင်းနဲ့ချီတဲ့လူထုကြီးဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်မှာ မော်စကိုမြို့က လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြ ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တုန်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ၀န်ကြီးချုပ် ဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့ လက်ရှိအာဏာရ ပါတီက အနိုင်ရခဲ့တာကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:08 PM
အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြောင်းလဲနေသော မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ နောက်သို့ ကြေးမုံသတင်းစာသည် စတင်လိုက်ပါ လာပြီဖြစ်ကြောင်း ၆.၁၂.၂၀၁၁ နေ့ထုတ်ကြေးမုံသတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့အာဘော်က သက်သေပြလျှက်ရှိပါ၏ ၊ယခုကဲ့သို့သောအရေးအသားမျိုး အစိုးရအာဘော်သတင်းစာတွင် ဤတစ်သက် ပထမဆုံးမြင်ဘူးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံပါသည် ။
အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင် - ရွှေပြည်သာ)က အဓမ္မ၀ါဒကို စွန့်လွတ်ကြောင်း ၀န်ခံလက်မှတ်ရေးထိုး
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:24 AM
Eleven Media အားဆန့်ကျင်သည့် ပုံတစ်မျိုး အွန်လိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:57 PM
T-50 of Russia
F- 22A of US
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:46 AM
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 7:52 AM
ဦးတင်ဦး ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူများသည် နေပြည်တော်သို့ ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင်ရောက်ရှိလာပြီး နေပြည်တော်ရှိ တော်ဝင်နေပြည်တော် ဟိုတယ်တွင်ခေတ္တ တည်းခိုကာ ၁၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးသို့ သွားရောက်ကာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး ဦးဆောင်သော ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:27 AM
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာအလုပ်သမားများက အစိုးရသို့ ပေးဆောင်ရသော ၀င်ငွေခွန်ကို လာမည့် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှစတင်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက် သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၇/၂၀၁၁ ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည် ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:46 PM
BOT ဆိုတာနဲ့ ငွေကောက်မယ်ထင်နေတဲ့ Eleven ကသန်းထွဋ်အောင်အတွက် BOT ကကြီးခခွေး
ဒီနေ့ Eleven Media ရဲ့ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာမှာ ရန်ကုန်က ခုံးကျော်တံတားတွေကို BOT စနစ်နဲ့ ဆောက်မယ့်သတင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သတင်းတွေမှာ ထည့်လိုက်ကြောင်း ဒါကြောင့် Eleven ရဲ့ မဟာပညာရှိ သန်းထွဋ်အောင်က BOT ဆိုတာကြားတာနဲ့ တံတားဖြတ်သန်းခ ကောက်တော့မှာပဲ ဆိုပြီး သူ့ဂျာနယ်မှာ တံတားတွေဆောက်ပြီးငွေကောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းရေးလိုက်တာ ခုဝန်ကြီးတွေက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ငွေကောက်မယ်ဆိုတာ မမှန်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး BOT ဆိုတာ ( Build - Operation - Transfer ) ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်တဲ့သူက ငွေကောက်မှာဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးတွေဟာ ရှေ့နောက်အပြောမညီဘူးဆိုပြီး ရေးလာပါတယ် ။
တကယ်တော့ သန်းထွဋ်အောင်ဟာ သူကိုယ်တိုင် BOT ဆိုတာကိုနားလည်ပုံမရပါဘူး ၊ အဝေးပြေးလမ်းတွေမှာ BOT စနစ်နဲ့ လမ်းဖေါက်တဲ့ကုမ္မဏီတွေဟာ လမ်းအသုံးပြုခကောက်တယ် ၊ ဒီမှာလဲ BOT နဲ့ဆောက်ရင် ငွေကောက်တော့မှာပဲဆိုပြီး ထင်တစ်လုံးနဲ့ ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ။ BOT ဆိုတာနဲ့ ငွေကောက်မယ်လို့ တရားသေမှတ်ထားလို့မရပါဘူး ။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 8:47 AM
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:49 PM
Eleven Media အယ်ဒီတာချုပ် ဝေဖြိုးက EMG ကိုဝေဖန်သူများအား Facebook မှတစ်ဆင့် ရိုင်းပြ မောက်မာစွာတုန့်ပြန် သဖြင့် မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်
Eleven Media မှအယ်ဒီတာချုပ်ဝေဖြိုးက Eleven Media Group နှင့် CEO သန်းထွဋ်အောင် တို့ကို ဝေဖန်သူများအား ၄င်းတို့၏ Facebook စာမျက်နှာမှတစ်တဆင့် ရိုင်းပြမောက်မာစွာ တုန့်ပြန်လာသဖြင့် မကျေနပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး ၄င်းတို့ကိုဝေဖန်သူများသည် ပေးစာကြွေးစာများ စားနေသူများဖြစ်သည်ဟု ပါဖေါ်ပြထားသဖြင့် Eleven Media အားဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများပင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါသည် ။အောက်တွင် Facebook ပေါ်မှ ပြည်သူအချို့၏ တုန့်ပြန်သံများကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည် ။
ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်ပြည်သူအား ရိုင်းပြမောက်မာစွာတုန့်ပြန်ခဲ့သည့် Eleven Media မှ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ရှေ့မမီနောက်မမီ အယ်ဒီတာချုပ်ဆိုသူ ဝေဖြိုး
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ ။ Pandora ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါက သမိုင်းအမှားအား ကန့်ကွက်ခြင်း ဆိုတဲ့ Note မှာ မြန်မာတိုင်းမ် နဲ့ Eleven က သူဌေးတွေ သမ္မတဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကွန်မန့်ရေးပါတယ်။ကျွန်တော်က နောက်ကလိုက်ပြီး Eleven CEO ကိုပဲ သမ္မတအဖြစ် မဲပေးမယ်လို့ပဲ ကွန်မန့်လေးပေးမိပါတယ် ... ဒီလိုကြီးတွေ ဆော်ထားတာ ... ဟီးဟီး ။ နှုတ်သီးကောင်း လျာပါးတို့ ၊ အမိယုတ်သား နှုတ်ကြမ်းတို့ ၊ ကြက်ခေါင်းဆိတ်မခံ တို့ မပြောတော့ပါဘူး ...
အဲဒါသာ ကြည့်တော့ဗျာ။ တရားစွဲမယ် တကဲကဲနဲ့။ အဟုတ်နော် သူတို့က အစွဲကြမ်းတယ်။ တရားရေးနဲ့ ပိုင်ပုံရတယ်။ ကြောက်ပါတယ်ဗျာ။ ထိုင် ကန်တော့ဆိုလည်း ကန်တော့ပါ့မယ်။
ဒါပေမယ့် အဝေဖန်မခံနိုင်ရင်တော့ မီဒီယာ မလုပ်စားတာပဲကောင်းပါတယ်။ သူတို့ကို ဝေဖန်ရင် ပြည်သူမဟုတ်တော့ဘူး ( နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်သွားပြီ ) .... သူတို့ပြောမှပဲ ကိုယ်မှတ်ပုံတင် ကိုယ်ပြန်ကြည့်မိတော့တယ်။ ပြည်သူ့အသံစစ်စစ် ဆိုတော့ မခက်ပေဘူးလားဗျာ .....း))
စာအုပ်ထုတ်တာကော၊ Billboard ထောင်တာကော ၊ လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ ဖားဆောင်းပါးတွေကိုရော နောက်ဆို ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်ပါတော့မယ် .... စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်အရ ဝေဖန်ရင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုပြီး ခေါင်းစဉ် တပ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ ဒဏ်ရာများက ဗရပွနဲ့ ဆိုတော့လည်း ဟိုနားထိလည်း နာ၊ ဒီနား ထိလည်း နာ ပေါ့လေ။
သမိုင်းအမှားအား ကန့်ကွက်ခြင်း ဆောင်းပါးနဲ့ အပေါ်က အနီဝိုင်းထားတဲ့ သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းကြီးကို ဆက်စပ်မူမရှိဘူးလို့ ထင်လို့ ပြောမိပါတယ်။ ဒုက္ခ။ ဟုတ်တယ်လေဗျာ။ သူတို့ ဆရာ ၈၈ မှာ ပါ မပါ ဘယ်သူက ရိုက်စစ်နေလို့လည်း။ Self Promotion ၊ Self Patronizing ကိုတော့ မြင်တတ် သိတတ် ပြောတတ်ပါတယ်။ လုပ်ရင်လည်း မသိမသာလေး လုပ်တတ်ဖို့က မီဒီယာပညာရပ် တခုပါ။ အတင်း အဓမ္မ ကတော့ပြည်သူကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ခွံမကြွေးနဲ့ပေါ့ဗျာ ....
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 9:41 AM
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအီး
သူတို့နိုင်ငံခါင်းဆောင်အတွက် ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေကြသော ပြည်သူများ
ငိုတာတောင် ကွန်မြူနစ်တွေက ဟန်ဆောင်ပြီးငိုဟန်ပြုနေကြတာလို့ အဝေဖန်ခံရရှာပါသေးတယ်
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:52 PM
အီရန်က ဖမ်းမိထားတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး ( CIA ) သူလျှို
အီရန်ထောက်လှမ်းရေးက ဖမ်းဆီးမိသွာတဲ့ CIA သူလျှို Amir Mirzayi Hekmati
(သူ့ကိုဖမ်းဆီးမိတဲ့အကြောင်းအီရန်အစိုးရ ရုပ်သံက ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် )
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:38 PM
" သမ္မတက ထိုးစစ်ရပ်ရန် အမိန့်ထုတ်သော်လည်း တိုက်ပွဲများမရပ်သေး " ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ အလားတူ သဘောမျိုးပါတဲ့သတင်းတွေကို သတင်းဌာနတော်တော်များများမှာတွေ့နေရတယ် ၊ တိုက်ပွဲရပ်တယ်ဆိုတာ ခလုပ်ပိတ်လိုက်သလိုတော့ "ထပ်" ခနဲ ဘယ်ရပ်သွားပါ့မလဲဗျာ...မဟုတ်ဘူးလား ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ၀မ်းသွားနေလို့ ၀မ်းပိတ်ဆေးသောက်ရင်တောင် ချက်ချင်းမှမရပ်တာ.... ဒါကစစ်မြေပြင်မှာ စစ်ဖြစ်နေတာလေ.. ထိုက်သင့်သလောက်တော့ကြာ မှာပေါ့...ဒါဘာများဆန်းနေလို့လဲဗျာ..... ခက်တော့ခက်နေပြီ...နောက်ပြီးတော့ စစ်ဆိုတာမျိုးကလည်း တစ်ဘက်ကရပ်တိုင်းရပ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ ဒီလိုတစ်ဘက်ကရပ်တိုင်းသာ ရပ်ကြေးဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ စစ်ဆိုတာ ဘယ်ရှိပါတော့မလဲဗျာ...။
ဒါတကယ်မရပ်ချင်လို့ဖြစ်မှာပါ ၊ သမ္မတက ပရိယာယ်သုံးတာနေမှာပါ .. တကယ်ရပ်ချင်စိတ်ရှိရင် ရပ်ရမှာပေါ့ ၊ လွယ်ပါတယ်ကွာ ဆိုပြီး စေဒကတက်ချင်တဲ့သူတွေ ရှိရင် ခင်ဗျားတို့ စစ်တွေဘာတွေရပ်ဘို့ အသာထားလို့ အပေါ့သွားလို့အရှိန်ရနေတုန်းလေးပဲ ဦးနှောက်ကနေချက်ချင်းရပ်လို့ခိုင်းကြည့်စမ်းပါ ရပ်မလားလို့ .....။
ကိုယ့်ခန္ဓာ တစ်ခုတည်းမှာတောင် ကိုယ်လုပ်တိုင်းမဖြစ်တာ လူတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ချက်ချင်းမဖြစ်ရကောင်းလားဆိုပြီး အပြစ်တင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ .....
မင်းဖေါ်ကောင်လုပ်လို့ ထောင်ထဲဝင်သွားရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိတော့ဘူး လို့ထင်နေလား သန်းထွဋ်အောင် .... ဟား.....ဟား....ဟား......ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်သူဆိုတာ မင်းသိနေလောက်ပါပြီ....ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေပါမောင်ရင်....။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:57 PM
ရွှေည၀ါဆရာတော်နှင့်ပတ်သက်၍ အတိုက်အခံတို့ပြစ်တင်ပြောဆိုဝေဖန်ကာ ငရဲယူခဲ့ကြ ကုန်သော နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိ တော်ကို ဖတ်ရှုတော်မူကြပါကုန် ။ မသိဘဲနဲ့အပြစ်တင်နေကြတော့ အကုသိုလ်က နည်းနေလို့အ၀ိစိ သွားရတာနှေးနေတယ် ထင်နေသူများ ခုလိုသိပြီးတော့မှ အပြစ်တင်တော့ အ၀ိစိ မြန်မြန်ရောက်တာပေါ့ ။
င်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဥက္ကဌ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 11:48 AM